COVID-19 Archives - Myanmar Pressphoto Agency
MPA August 27, 2021
[ English Below ] By MPA ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့တွင် နေအိမ်ပြင်ပသို့ ထွက်သည့် ဒေသခံ ​ပြည်သူများအား စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီး Maskတပ်ဆင်မထားသူများအား...
COVID-19 ကူးစက်မှု မြင့်တက်နေသဖြင့် မန္တလေးနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့များသို့ ခရီးသည်များ ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်
By MPA COVID-19 ကူးစက်မှုနှင့်သေဆုံးမှုမြင့်တက်နေ၍ Stay at Home မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညယထားသည့် မန္တလေးခရိုင်ရှိ မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်နှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့တို့အား...
စစ်အခြေစိုက်စခန်းများစွာရှိသည့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ Stay at Home တွင်ပါဝင်
By MPA စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်း များပြားစွာရှိသဖြင့်စစ်တပ်မြို့ဟု ခေါ်ဆိုကြသည့် မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့ကိုStay at Home မြို့အဖြစ်သတ် မှတ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနက...
မောင်တောခရိုင်တွင် နယ်ခြားစောင့်၁၆၀ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိ
By MPA ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်မှ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင် စုစုပေါင်း ၁၆၀ ဦးမှာ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်တွင် ကိုဗစ်ပိုး ထပ်တွေ့ထားကြောင်း...
မောင်တောမှ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၉၃ ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့
By MPA ရခိုင်ပြည်နယ် ၊မောင်တောခရိုင်သို့ ရန်ကုန်မှ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ နယ်ခြားစောင့်ဝင်နဲ့သူတို့မိသားစုတွေအပါအဝင် ၉၃ ဦးမှာ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ဒီနေ့မှာ ကိုဗစ်ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ “နယ်ခြားစောင့်၊လဝကရယ်၊မိသားစုဝင်တွေလည်း...
Semi-Lockdown begins in Mandalay
MPA December 5, 2020
Semi-Lockdown begins in Mandalay<!-- AddThis...
Volunteers arrive in Yangon to assist in COVID defense operations
MPA October 6, 2020
Photo – JPiang /MPA Volunteers arrive in Yangon to assist in COVID 19 defense...
Thuwanna COVID-19 Medical Center : Update News
MPA October 1, 2020
Photo – MPA As of September 30, 157 men and 199 women. A total...
Stay At Home : Three Townships in Mandalay
Photo – Kaung Zaw Hein / MPA In Mandalay, the designated stay at homes...